Lalao 9 sy fampiharana maimaim-poana hankafizanao ny faran'ny herinandro | Vaovao IPhone
Lalao 9 sy fampiharana maimaim-poana hankafizanao ny faran'ny herinandro
Manararaotra ny fanatonana ny Krismasy, sy ny fialantsasatra izay ho ankafizin'ny maro aminareo, ary efa eo antenatenan'ny faran'ny herinandro, mitombo ny tolotra sy fihenam-bidy ao amin'ny App Store. Betsaka amin'ireo rindranasa izay aloa matetika no mahazo fihenam-bidy lehibe, ary izao no fotoana tsara indrindra hisintomana lalao sy fampiharana maimaim-poana, satria manana ny faran'ny herinandro iray izahay hanandramana azy ireo.
Tadidio fa ny lalao sy ny fampiharana rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity dia atolotra maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra; Tsy fantatray hoe mandra-pahoviana no hitohizan'ny fampiroboroboana, ny hany zavatra fantatray dia manan-kery izy ireo amin'ny fotoana namoahana ity lisitra ity, noho izany, haingana ary alao izy ireo alohan'ny hanenenan'ilay mpandrindra.
2 ZoomNotes- Notetake, Sketch, PDF, Ankehitriny
3 Stopwatches marobe hampiasanao
4 Pikantsary manokana
5 mihoatra ny sary
7 Jet Ball (HD)
8 Adin'ny eklipsa
9 Ny maty manakana
Amin'izao fotoana ankehitriny izao, ny ankamaroan'ny andro lanintsika amin'ny iPhone eny an-tanantsika, ny fakana hevitra amin'ny Facebook, Twitter, Instagram, miresaka amin'ny WhatsApp na Telegram na milalao lalao Super Mario Run. Indraindray io dia mety hanjary tsy ho azon'ny tanana, ary tsy tena fantatsika izay nandaniantsika fotoana, na izay nandaniantsika ny batterie iPhone. Apptracker manara-maso ny fotoana lanintsika amin'ny fampiasana ny tsirairay amin'ireo rindranasa ao amin'ny iPhone, ary manampy antsika hahafantatra fa, angamba, tokony hanapaka kely ny tenantsika isika. Izy io dia rindrambaiko tena atolotra indrindra, indrindra raha mieritreritra ianao fa mety manana fiankinan-doha amin'ny iPhone na hamantatra hoe inona no lanin'ny zanakao amin'ny fotoanany. Ny vidiny mahazatra dia € 4,99 fa ankehitriny azonao atao maimaim-poana.
ZoomNotes- Notetake, Sketch, PDF, Ankehitriny
ZoomNotes Is a kahie nomerika izay tena ilaina indrindra amin'ny iPad-nao mba handray an-tsoratra an-tànana amin'ny marika rehetra. Ahitana safidy maro isan-karazany hisafidianana penina, loko, tsipika ... Misy «fandavana palma», izany hoe mamantatra ny felatanana ka tsy hanelingelina ny soratra, ary ny iray amin'ireo tanjany dia ny fampiasana zoom, hanamora kokoa ny fanoratana. Ny vidiny mahazatra dia 7,99 € fa ankehitriny maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra.
Stopwatches marobe hampiasanao
Ity dia fampiharana azonao atao araho maso ny fotoana naharetanao na tsy nanaovanao zavatra, tsotra toy izany. Amin'ny alàlan'ny interface interface intuitive sy tena miloko dia azonao atao ny mampavitrika ny timer maromaro ahafahanao miato miaraka amina fikitika iray fotsiny ary amin'izay dia ho fantatrao hoe mandra-pahoviana ianao no hanao asa iray, mandra-pahoviana ianao no tsy mifoka sigara, hafiriana izay ny fisotroana farany ... Ny vidiny mahazatra dia 0,99, € XNUMX, ​​fa amin'izao fotoana izao dia ananananao maimaim-poana ao amin'ny App Store.
Raha reraka amin'ny sary mihetsika mahazatra amin'ny iPhone ianao, amin'ity fampiharana ity dia hahita be dia be ianao Wallpaper HD hanome azy mikasika hafa. Ny vidiny mahazatra dia € 1,99, maimaim-poana izao mandritra ny fotoana voafetra.
mihoatra ny sary
mihoatra ny sary Is a mpamoaka sary sy horonantsary ho an'ny iPhone azonao ampiasaina amin'ny efijery feno hanitsiana ny famirapiratana, ny fifanoherana, ny fivoahana, ny mari-pana sns ..., ankoatry ny fahafahanao manampy frame, lahatsoratra, sivana ... Ny vidiny mahazatra dia € 0,99, saingy izao dia azonao maimaim-poana raha mailaka ianao.
Ny tsara indrindra lalao karatra Ho an'ireo fotoana ao an-trano fandroana ireo, ny bus / metro mitaingina na ny filaharana any amin'ny banky, dia tsy isalasalana fa ilay irery. Ary ankehitriny manana izany maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ianao mba hamonjy ny € 1,99 izay vidiny matetika.
Jet Ball (HD)
«Jet Ball dia lalao mitaingina rindrina mahery vaika feno sary manaitra, taonina amina taonina» izay tsy maintsy hataonao mandrava biriky sy sakana raikitra mihoatra ny haavon'ny azy ireo. Ny vidiny mahazatra dia € 1,99 fa amin'ity faran'ny herinandro ity dia azonao maimaim-poana.
Kilalao tany am-boalohany, Retro, mahafinaritra ary tena mampiankin-doha izay mazàna mitentina € 0,99 fa izao azonao atao maimaim-poana.
Ny maty manakana
Ity dia lalao ankamantatra sy ny zombies. Ny tanjona dia ny handrava ireo zombie rehetra azonao atao. Fa tokony ho haingana be ianao ary ambonin'izany rehetra izany, aza manao fahadisoana. Ny vidiny mahazatra dia € 1,99 fa amin'izao fotoana izao dia ananananao maimaim-poana ao amin'ny App Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao 9 sy fampiharana maimaim-poana hankafizanao ny faran'ny herinandro
Enterprise dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana.
Valiny amin'ny Enterprise
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria rehefa milalao Super Mario Run
LG no ho mpanamboatra ny efijery aforitra ho an'i Apple, Microsoft ary Google